अर्थ/वाणिज्य – Page 2
September 28, 2018 Spnews Comments Off on दशैको मुखैमा चिनीको मूल्य प्रति किलो १५ रुपैयाँले बढ्यो
September 24, 2018 Spnews Comments Off on ह्वात्तै घट्यो आज सुनको भाउ ! हेर्नुस आजको भाउ !!
आज नेपाली बजारमा सुनको भाउ कति ? हेर्नुस पुरा विवरण
September 19, 2018 Spnews Comments Off on आज नेपाली बजारमा सुनको भाउ कति ? हेर्नुस पुरा विवरण
काठमाडौँ : नेपाली बजारमा आज (बुधबार) सुनको भाउ स्थिर छ। आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ५७ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै आज तेजावी सुन प्रतितोला ५७ […]
नेपाली बजारमा आज सुनको भाउ कति छ ?
September 18, 2018 Spnews Comments Off on नेपाली बजारमा आज सुनको भाउ कति छ ?
काठमाडौँ । आज छापावाल सुन ५८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ। हिजो पनि छापावाल सुन ५८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तैगरी आज तेजाबी सुन प्रतितोला ५७ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ। […]
आज सुनको भाउ कति ? हेर्नुस पुरा विवरण
August 26, 2018 Spnews Comments Off on आज सुनको भाउ कति ? हेर्नुस पुरा विवरण
काठमाडौं: हप्ताको पहिलो दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य ह्वातै बढेको छ। यो महिनाको सुरुदेखि नै घटेको सुनको भाउ आज भने बढेको हो । हिजो प्रतितोला ५६ हजार रुपैयामा कारोबार भैरहेको छापावाला सुनको मुल्य ह्वातै […]
आज सुनचाँदीको भाउ कति ? (पुरा विवरण पढ्नुस)
August 20, 2018 Spnews Comments Off on आज सुनचाँदीको भाउ कति ? (पुरा विवरण पढ्नुस)
काठमाडौं : आज साताको दोस्रो दिन नेपाली बजारमा सुनको मुल्यमा केहि फरक छैन। हिजो प्रतितोला ५५ हजार ८ रुपैयामा कारोबार भैरहेको छापावाला सुनको मुल्य आज कुनै परिवर्तन नआएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । […]
यस्तो छ आज सुन-चाँदीको बजार भाउ
August 13, 2018 Spnews Comments Off on यस्तो छ आज सुन-चाँदीको बजार भाउ
काठमाडौं । आज (सोमबार) पनि नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य ५६,२०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै आज नेपाली बजारमा तेजावी सुनको मूल्यमा भने १ सय रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। हिजो आईतबार तेजावी सुन ५५ हजार […]
August 7, 2018 Spnews Comments Off on यस्तो छ आजको सुनको भाउ
काठमाडौं । मंगलबार सुन प्रतितोला ५६ हजार एक सय रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार पनि यहि मूल्यमा सुनको कारोबार भएको थियो । तेजावी सुने ५५ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यता […]
आज सबैभन्दा सस्तियो सुन, यस्तो छ आजको भाउ
August 2, 2018 Spnews Comments Off on आज सबैभन्दा सस्तियो सुन, यस्तो छ आजको भाउ
काठमाडौं । आज (बिहीबार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ अत्यधिक सस्तो भएको छ। मंगलबार ५६ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बिहिबार तीन सय रुपैयाँ घटेको छ । बिहिबार नेपाली बजारमा ५६००० रुपैयामा कारोबार भईरहेको नेपाल […]
नेपालमा ह्वातै घट्यो सुनको भाउ, ६ महिनायताकै सस्तो दशैँ सम्म अझै घट्ने
July 31, 2018 Spnews Comments Off on नेपालमा ह्वातै घट्यो सुनको भाउ, ६ महिनायताकै सस्तो दशैँ सम्म अझै घट्ने
काठमाडौं – स्थानीय बजारमा सुनको भाउ ६ महिनायता कै सस्तो बिन्दुमा झरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा निरन्तर गिरावट आउँदा स्थानीय बजारमा पनि केही महिनायताकै तल्लो बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार […]